Aluminium CNC machine, Tsika Aluminium Zvikamu - Createproto - Createproto Tech Co., Ltd.
GETA A QUOTE
BASA / CNC Aluminium
Cnc kumumvuri machine
GadziraProto CNC aluminium machining masevhisi anokupa iwe kwese-kwakatenderedza tarisiro yekuti timu yedu inoongorora yako projekiti zvakanyatso kuigadzirisa neinoshanda kwazvo maitiro eanogadzira aruminiyamu kugadzirisa yako nguva uye mutengo.
Tinogona kukubatsira iwe kugadzira aruminiyamu prototypes uye yakasarudzika aluminium zvikamu neyedu ane ruzivo eprojekiti mainjiniya uye machinists kusangana neyako dhizaini dhizaini.
GADZIRA PASI PASI QuOTE
Kana iwe uri kutsvaga mutengesi kuti akupe iwe yemhando yepamusoro aruminiyamu zvikamu CNC zvakagadzirwa, GadziraProto ndeimwe yeanogona kwazvo uye anodhura masosi anoshanda mukugadzira zvakanyatsogadziriswa zvikamu zvemuchina pane epamberi 3-axis uye 5-axis CNC michina.
CreateProto's CNC aluminium sevhisi irikuedza kukupa iwe hunyanzvi nzira uye hunhu hwakanaka nechikwata chehunyanzvi vanoongorora chirongwa chako zvakanyatsonaka, tsvaga mhinduro yakanakira iwe uye gadzira yako yakasanganiswa michina zvikamu munzira inoshanda kwazvo yekuchengetedza nguva yako uye mutengo.
Yedu masevhisi eCCC simbi machining, kunyanya pane aruminiyamu prototyping, tsika aluminium machining, aluminium yekugaya, uye zvimwe kunze kwezvikamu zvealuminium, isu tichine imwe CNC yakapfava simbi yakadai seMagnesium, Zinc, Titanium uye CNC yakaoma simbi senge Simbi, Stainless Simbi ese edu makuru masevhisi.
Profesional Aluminium Machining & Yezviitiko Chikwata
Kukwidziridzwa kwepamusoro kunodiwa CNC aluminium machining inoratidza kuchenesa kuti uwane kushivirira kwakanyanya. Yekumhanyisa 3-axis uye 5-axis yakatwasuka CNC yekumisikidza nzvimbo uye yedu yakakura ruzivo uye yakafara ruzivo inotibatsira kusvika zvakanyanya zvakanyanya kushivirira, kuwana ako aruminiyamu zvikamu kunze panguva. Yedu yakajairika shiviriro kurongeka kubva pa +/- 0.005 "(+/- 0.125mm) kusvika +/- 0.001" (0.025mm) yeCNC aluminium. Vatariri vedu veprojekiti vanozobvunza newe pachikamu chese che projekiti yako uye vachatsvaga kupa yakanyanya mwero yekunyatsoita inogoneka nemazvo machining.
Isu takagadzira anoshanda, akarongeka uye anodhura-maitiro maitiro ayo anopa akakwirira zvigadzirwa zvigadzirwa. Yedu dhizaini uye mapurogiramu echikwata anoongorora yega yega chirongwa kwete chete chinomhanyisa asi zvakare chakaringana kuyedza mutengo, kugadzirwa uye kuomarara kuvimbisa kuti tinosangana nezvose zvakatemwa zvechirongwa chako. Isu tinoongorora dhizaini yako uye tinogarisa chero zvido zvakakosha senge kutenderera, EDM kana waya waya EDM maitiro anodikanwa. Kujekesa kwakadzama uku kunovimbisa iwe kuti unogashira anoshanda ekugadzirisa mashandiro ebhajeti rako, nguva uye zvinhu.
Mushure mekunge CNC aluminium yakagadziriswa, sekudikanwa, isu tinogona zvakare kupa yechipiri kugadzirisa uye yakajairwa aruminiyamu pamusoro kupedzisa mashandiro akadai sejecha kuputika, kupfura kuputika, kupukuta, anodizing, oxidation, electrophoresis, chromate, poda kupfeka uye kupenda.
Sezvimwe nezvimwe zvinhu, zvinopedzisa zvealuminium zvakagadzirirwa kuti zvichengetedze nzvimbo iripo kana kusimudzira imwe nyowani inoratidzika kana kushanda zvinonyanya kudiwa. Munguva yekugadzirisa, isu tanga tichitaurirana nevatengi vedu tichikurukura ne post post zvinodiwa. Zvakare isu tinogara tichipindura kumibvunzo yese nepo nzvimbo ichipedzisa kuve nechokwadi icho chinokupa iwe chitarisiko chaunoda.
5-akabatana CNC hwokugaya hwakabvira Aluminium
GadziraProto inopa epamberi 5-axis machining masevhisi ayo anowedzera zvakanyanya huwandu hwenzvimbo dzekugadzira zvikamu mumhando dzakasiyana uye saizi. 5-axis CNC yekugaya michina inogona kuita yakakwira-chaiyo machining uye yekugaya yezvinhu zvakaomarara zvikamu zvinokubatsira iwe kusangana ako akaomesesa ekugadzira matambudziko.
Isu tine timu ine ruzivo yeinjiniya uye machinists anokwanisa kuita nemazvo CNC milling mabasa vachishandisa rakapamhama razvino tekinoroji software kunyora inoshanda kwazvo nzira yekushandisa. Isu takagadzira anoshanda, akarurama uye anodhura kuita maitiro kusundira michina yedu kune kwavo kuzere kugona kunopa zvakakwirira mhedzisiro.
Zvakanakira 5-Sekaiichi machine
Pane 5-axis machining centre, yekucheka chishandiso inofamba ichiyambuka X, Y uye Z mitsara mitsara pamwe nekutenderera pane A uye B mademo ekusvika pabasa chidimbu kubva chero nzira.
Muchina pamativi mashanu echikamu neyakagadzika imwechete.
Inochengetedza nguva yekumisikidza, ichiwedzera michina yekugadzira.
Yakakwirira kurongeka uye yakasarudzika yepamusoro inopedzisa, ichivandudza huwandu hwese hwemhando
Zvidimbu zvebasa hazvifambiswe nepakati pezvivakwa zvebasa, zvinoderedza kukanganisa uye kuita mari, nguva shoma yebhenji.
Kukuya uye kuchera nemakona emakona. Yakagadziridzwa hupenyu hwechishandiswa uye kutenderera nguva semhedzisiro yekuchinjisa chishandiso / tafura yekuchengetedza yakakwana nzvimbo yekucheka uye kugara chip chip.
Maturusi mapfupi uye akaomarara anogona kushandiswa. Yakakwira chokurukisa kumhanya uye chikafu chekudhara chingaitwe uchidzikisa mutoro pane yekucheka chishandiso.
EDM Uye Wire EDM yeMachina Aluminium Zvikamu
EDM (Electrical Discharge Machining) inoshandiswa kuzadzikisa kubviswa kwezvinhu kubva pamusoro pebasa rebasa nemagetsi zvinoburitsa maitiro.
Inoshandiswa zvakanyanya mualuminium zvikamu zvemuchina seyeyebatsiro machining maitiro nekuti zvimwe zvikamu zvakaoma zvinogona kuwanikwa chete nerubatsiro rweEDM. Zvikamu zvinoratidzirwa neakadzika dhizaini zvinorema kujekesa makona, kana ikangoshandisa CNC machining inosiya hombe nharaunda pamakona, izvi hazvitenderwe kune zvimwe zviitiko. Nekushandisa EDM maitiro zvinokwanisika kuchengetedza unopinza. EDM kunyorera kunosanganisira Blind Cavities (Keyways), Yakaomarara Dhata, Sharp Makona, Akanaka Kumusoro Anopedzisa, Mutete Masvingo, zvichingodaro.
Waya EDM inzira yekucheka simbi uye zvimwe zvinoitisa zvinhu, umo tambo inofamba inokanganisa zvinhu nenzira inodzorwa. Mune waya EDM yekucheka, tambo yesimbi (inowanzo gadzirwa nendarira kana yakasungirirwa mhangura) iri pakati pe0 kusvika 0,3 mm dhayamita inoshandiswa se electrode iyo inonyatso kukombama nechikamu chinofanira kutemwa, nokudaro ichigadzira chimiro chaunoda kana fomu.
Musiyano uripo pakati peSinker EDM uye Wire EDM iri kwazvo mumhando ye electrode inoshandiswa mune yega yega maitiro, chokwadi chekuti hapana gomba risati racherwa rinodiwa neSinker EDM, pamwe neiyo 3D masimba iyo Sinker EDM inokwanisa kuita, Wire EDM chete ine kugona kuburitsa 2D zvikamu.
Yakaderera-vhoriyamu Mashini eCustom Aluminium Zvikamu
Yakadzika vhoriyamu CNC aruminiyamu machine ndizvo zvatinowanzoita kuchengetedza mari yako uye nguva pazvinhu zvakaoma zve3D zvichienzaniswa nekugadzirwa nedzimwe nzira senge kukanda kana kuumba kana huwandu hwacho husiri pasi pekukanda asi hwakawanda kupfuura prototype. Yakaderera vhoriyamu kugadzirwa inomhanya kubva kuGadziraproto inobvumira vagadziri mumotokari, zvekurapa kana zvehutano indasitiri kuburitsa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro pamutengo wakachipa, uye nekudaro zvinogona kuendesa zvigadzirwa kwamberi pane zvakarongwa.
GadziraProto inogona kupa yakasarudzika Aluminium Machined Zvikamu & Mhinduro.
Kutanga NECHEMAHARA PROJECT N0W
Yedu machining masevhisi anopa huwandu hwakawanda hwekugona kwetsika aruminiyamu machine ndeimwe yemabhizimusi akakosha uye akavandudzwa kubva kwatiri. Pfupi kumhanya kugadzirwa kwealuminium machining ibasa rebridge pakati pekufananidza uye kugadzirwa kwemazhinji isu atinopa.
Kana dhizaini yatenderwa tinogona kushandisa inoenderana tekinoroji kuburitsa yakaderera vhoriyamu machining huwandu hunodiwa munguva pfupi nemutengo unonzwisisika. Iyo michina inounza simba, kumhanya uye kunyatsoita; isu tinogadzira chishandiso geometry, chigadziko jigs uye kutsvaga zvikamu seimwe kumhanya kukudziridza kuve nechokwadi nekukurumidza kumisikidza uye zvakaenzana zvimiro. Yedu mwero wekuita nemazvo inoderedza yechipiri ruoko rwemaoko uye inodzivirira kunonoka kweprojekiti.
CNC Aluminium Machining Chinyorwa Giredhi Isu Tinoshanda Navo
Aluminium ndiyo simbi inonyanya kushandiswa isinga simbi. Nekuda kwekuchinjika kwayo uye kuchinjika, pamwe neayo akawanda maalloys, ine huwandu hwakawanda hwekushandisa kwemaindasitiri, kusanganisira machining uye zvishandiso. Iyo yakaderera mutengo uye kugadzikana zvinoreva kuti yakakosha prototyping, uye yayo chaiyo zvivakwa inoita kuti ive inozivikanwa mune ese marudzi ese ekushandisa uye zvigadzirwa. Zvikamu zvakagadzirwa kubva kualuminium kazhinji hazvidhuri nekuti zvinogona kugadzirwa munguva shoma kupfuura zvimwe zvakawanda simbi simbi uye hazvidi zvekupedzerwa.
Aluminium inouya mune akasiyana maumbirwo uye mamakisi. Rudzi rwealuminium giredhi iwe yaunosarudza pakupedzisira zvinoenderana nekuti iwe unofunga kushandisa simbi sei. Kuti uwane rumwe ruzivo pane zvese zviripo mhinduro, ungangoda kuverenga iyo Wikipedia chinyorwa pamusoro penyaya.
Nyaya Yekudzidza 1: 5-axis CNC Yakavezwa Aluminium Reflector
Aluminium reflector inoshandiswa zvakanyanya mumhando yepamusoro-magumo emota, rinova rimwe remabasa akaomesesa mukugadzira mota. Muzviitiko zvakawanda, vagadziri vezvigadzirwa vanotarisira kuti vagadziri ve prototype vanozogona kunyatsonzwisisa uye kutarisisa kune zvese zvese zvavanofunga, asi vashoma chete vane ruzivo vagadziri ve prototype vanogona kuzadzisa optic dhizaina dhizaini. Tinogona kutaura nemazita kuti chiratidziro chikamu chechitarisiko chemwenje, icho chisingaite chete chikamu chemahara, asi zvakare chinotarisisa kuoneka kwerambi.
Isu Tinogadzirisa Sei iyo Aluminium Reflector Prototype?
CNC hwokugaya hwakabvira Process
Chikamu Zita: HDLP-Reflector
Machine Chishandiswa: 5-akabatana CNC azvikuya muchina
Divi: 180mm * 120mm * 100mm
CNC Maitiro: Kucheka Chishandiso: Machine Nguva:
Semi-Kupedza R3.0 / R2.0 / R0.5 30h
Pedza-Kugadzira R0.25 / R0.15 50h
Kutora iyo yakaoma kuvaka mukufunga, 5-axis CNC muchina ichiri kukurira matambudziko kana uchishanda chikamu chose. CNC programming mainjiniya, avo vakawana ruzivo rwakawanda mukuenzanisira kugadzirwa kwemarambi, vanozoita zvakafambiswa nezve kugona kwemachina mushure mekuwana iwo madhizaini ekugadzira.
Kana zviri zvekuratidzira, iwo akasarudzika magetsi ekumeso achakwenenzverwa neCCC maitiro, asi padivi rekumashure, kune yakakosha kuungana mamiriro ayo akaoma kugadzirwa neCNC yekugaya sezvo ichasiya nzvimbo yakakura pamakona. Kuti ufambire mberi, matekinoroji anodikanwa kugadzira electrode yemhangura uye kushandisa EDM senge yekubatsira machining maitiro kubatsira kubvisa makona. Kazhinji maitiro aya anotora yakawanda nguva.
Iye zvino sezvo iro basa rave kuda kuitwa, yekupedzisira nhanho kushandira kunze kwemashure kupera. Deburring, makorari, yakanamirwa pamifananidzo, uye zvimwe zvakaitwa nemaoko-ekugadzirisa basa rakakosha zvakanyanya, zvinonongedza zvakananga kuoneka kwekupedzisira.
Nguva dzose, chiratidziro chakakumbirwa kuve girazi gloss, pane nzira mbiri dzekuziva izvi. Imwe ndeyekuchenesa kwemanyorerwo, mushandi anopuruzira zvikamu zvacho kusvikira zvapenya girazi, iwe unofanirwa kuve wakangwarira paunenge uchipukuta iyo yekumeso nzvimbo nekuti mamwe maOptics anodikanwa kuti achengetedze micheto yakapinza uye maitiro epolishi anogona kusiya nharaunda kumacheto.
Imwe nzira ndeyekuisa, yakanaka yekugaya yekupedzisa uye hapana marara anodikanwa usati waiswa. Mushure mezvose zviri kuitiswa, yekupedzisira nzvimbo inogona kupenya uye yakanaka.
Nyaya Yekudzidza 2: Prototyping Aluminium Zvikamu zveMedhi Chigadzirwa
Iyi inyaya yekurapa yedhijitari yeInstitute ye Ultrasonic Zvishandiso izvo zvine hunyanzvi mukugadzirwa kwechigadzirwa kwePortable Ruvara Doppler. Iyo prototype projekiti ndiko kukomberedzwa kwegore backup inotakurika ultrasound iyo inoratidza ine 360 ​​degrees kutenderera basa. Iyo inyowani uye kufambira mberi kweyekurapa kifaa dhizaini yemutengi R & D kuvandudza.
Kuona huremu hwakareruka uye simba rekuchengetedza zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvemagetsi, mutengi akasarudza iyo aluminium machining yeyese prototype modhi.
Dambudziko rakanyanya kune iyi aluminium prototype yaive yakajeka asi yakasimba dhizaini dhizaini neayo ese chikamu machining. GadziraProto yakagadzira chigadziriso nenzvimbo chaiyo yeanokwana kana mamwe masisitimu CNC ekugadzirisa. Munguva yekukurumidza prototype maitiro, iyo gadziriso uye gungano rakakosha zvakanyanya pamwe nekurapa kwepamusoro. GadziraProto inoungana uye kupolisha pamberi pekufananidzira kupedzisa kuve nechokwadi cheyakaungana gungano.
Icho chinodikanwa chealuminium yekupedzisa kupenda pane iyo prototype modhi yakaita kuti iite sekunge kuti ndizvo zvikamu chaiko kunze sekunge zvichibva mukugadzirwa kwakawanda, kwete chete zvakajairika prototype modhi. Isu tinopenda chirongwa ichi maererano nepatone Nha. Iyo mutengi yakapihwa nemucheka wakanaka. Isu tinoipenda mukati mekavha yekumberi mat chena ruvara tichishandisa pendi isinganetsi doro. Kavha yekumashure ine matt nhema nhema dhizaini kubva kuMold-Tech plaque hongu mupende isinganetsi doro. Mubato uri mupendi sevharo rekumashure uye zvakare pendi yerabha pamusoro pepende nhema kuita kuti mubato uwedzere kuita senge chaicho kubata. Yepamusoro-tekinoroji yekunzwa Panel yekhibhodi iri aluminium anodizing kuve nemanzwiro esimba.
Nyaya Yekudzidza 3: CNC Aluminium RC Mota Zvikamu
Kana iwe uri fan of RC mota, saka iwe unofanirwa kuziva kuti kune akawanda aruminiyamu zvinhu mune RC mota. Vatambi vanowanzove vanofarira nzvimbo dzemumigwagwa dzemumigwagwa dzakadai sedombo, idzo dzisingangoda chete kumhanya kwakanyanya, asi zvakare dzine zvirevo zvakakwirira zvakanyanya zvekusimba kwezvinhu zvemuviri.
Zvinoreva kuti kumhanya kwakanyanya kunoda kuti muviri wemuviri uve nechiedza sezvinobvira, uye kugadzikana kunoda kuti zvinhu zvisimbe zvakakwana. Aluminium zvikamu ndizvo zvinonyanya kushandiswa zvikamu muRC mota, kusanganisira muviri, furemu uye vhiri hub uye zvichingodaro.
Nekuda kwemazano akasiyana siyana ekuramba achivandudza mashandiro emota yeRC, RC mutambi mutambi anowanzo gadziridza dhizaini yavo, iyi mhando yekuda inowanzo kuve shoma, asi zvakare inoda kugamuchira chikamu munguva pfupi, nekuti vatori vechikamu aisada kupotsa mujaho nekuda kwekumirira zvikamu. GadziraProto seye prototype mugadziri uyo akanaka mukupa kukurumidza kuendesa kazhinji ndiyo sarudzo yekutanga yeRC aluminium zvikamu zvekugadzira, isu tine ruzivo rwakapfuma mukugadzira zvidiki batch aluminium zvigadzirwa, uye ivo vanogona kunzwisisa nekuziva dhizaini yemugadziri.
Nyaya Yekudzidza 4: Drone / UAV / Robhoti CNC Yakagadzirwa Zvikamu
Mukugadzirwa kwemaindasitiri eUAV / Drone uye zvikamu zveRobot, zvinosanganisira dambudziko senge zvinhu, maitiro, mutengo, huwandu hwekugadzira. Pane zvakawanda zvikamu hazvigone kuve kugadzirwa kwemazhinji nekushandisa zvakajairika maitiro, saka unofanirwa kushandisa imwe yakakosha maitiro ediki-epasi ekugadzirisa zvishongedzo, zvinogona zvakare kusanganisira echinyorwa kugadzirisa chinongedzo pakati. Kazhinji, isu tinonyanya kushandisa CNC machining, silicone kuumbwa, kukurumidza tooling uye imwe tekinoroji kuti ione tsika yakaderera vhoriyamu kugadzirwa. Iyi inzira yakanaka yenguva uye mutengo, mhanyisa chigadzirwa kutangisa kutenderera.
Iyo aruminiyamu kana kabhoni fiber zvinhu sechikamu chakakosha chezvinhu izvi zvikamu zvinoda kushandiswa kwekukwirira kwakanyanya uye yakanyanya kunyatso cnc CNC muchina unoshanda chidimbu mukukomba unogona kupedzisa maitiro ese, asi zvakare wakagadzirirwa raibhurari yekushandisa, uye ine otomatiki chishandiso chinja basa. Dzimwe nguva zvakafanira kuona linkage kudzora matatu kana kupfuura matemo kuverengera kwekushandisa kwechishongedzo neyakaomarara pamusoro.
Ichi chakakosha kudiwa hapana mubvunzo kupokana kukuru kune zvikamu zvinogadzira. Kana chigadzirwa chemugadziri chikauya kuzoraira zvidimbu gumi nemaviri, zvinowanzoomera kupindura, ndosaka vatengesi vezvigadzirwa vachifanirwa kutendeukira kumagadzirirwo echinyakare. Naizvozvo, yakaderera vhoriyamu yekugadzira yakanyatso kubatana neye prototype mugadziri, yakanaka yekugadzira inogara iine hupfumi uye inochinja zviitiko mukupa mhinduro dzakanaka kune yakasarudzika zvinodiwa.
Chinyorwa Sarudzo Sarudzo
Tekinoroji Sarudzo Yekutungamira
ISO 9001: 2015 ZVAKAITWA
Inokurumidza Prototyping Uye Kugadzira, Cnc Rapid Prototyping, Kukurumidza Prototyping, 3d Kudhinda & Rapid Prototyping Services, Cnc Kuchengetedza, Kurumidza Prototyping,
Saina kuti utore kugadzira uye kugadzirisa!